Tag: fiantsenana | Martech Zone
Nandritra ny herintaona mahery, ny mpivarotra dia niatrika ny fiatraikan'ny areti-mandringana amin'ny varotra ary toa niatrika vanim-potoana fivarotana fialantsasatra sarotra ihany koa ny tsena amin'ny 2021. Ny fikorontanana amin'ny famokarana sy ny famatsiana dia mitohy manimba ny fahafaha-mitazona ny lisitra. azo antoka amin'ny tahiry. Ny protokolà fiarovana dia manakana ny mpanjifa tsy hitsidika ny fivarotana. Ary ny tsy fahampian'ny asa dia mamela ny fivarotana hikorontana raha ny momba ny fanompoana ny mpanjifa
Mpivarotra: fantaro ireo fihetsika ireo izay ivon'ny fividianana anglisy
Alakamisy, Septambra 7, 2017 Alakamisy, Septambra 7, 2017 Douglas Karr
Hitanareo ve ny nataoko teo? Ity Midwesterner ity dia nampiasa ny tsipelina anglisy momba ny fitondran-tena fa tsy ny fitondran-tena. Te-hanaporofo amin'ny olon-drehetra aho hoe iza aho amin'izao tontolo izao… na tsia. Tsy mbola nankany amin'ny Fanjakana Mitambatra mihitsy aho na dia teo aza ny lova skotika sy britanika teo amin'ny ankohonan'ny reniko. (Jereo izany? Nataoko indray!) Ok, hatsikana ankolaka (doh!), Ity dia fampahalalana marobe azon'i CM Brand. Mino aho fa izany no izy
Alahady, May 25, 2014 Saturday, May 24, 2014 Douglas Karr
Miova haingana ny fivarotana antsinjarany - na amin'ny Internet na ivelan'ny Internet. Araka ny fomban-drazana, ireo orinasa mpivarotra dia matetika no tsy nanana tombom-barotra ambany sy avo lenta mba hamokarana ny valin'ny orinasa ilain'izy ireo mba hiainana. Mahita fihenam-bidy haingana amin'ny fivarotana amin'izao fotoana izao isika izay mampitombo ny fitomboana sy mampitombo ny fahombiazan'ny teknolojia. Ireo orinasa mpivarotra ambongadiny izay tsy manararaotra dia ho faty… fa ny mpivarotra mampiasa teknolojia kosa no tompon'ny tsena. Fiovan'ny demografika, ny revolisiona teknolojia, ary ny fangatahan'ny mpanjifa ho an'ny tena manokana